Miyaa software bilaash ah loo isticmaali karaa xumaanta? Wareegii 2aad (Maqaal runtii halis ah, oo ku saabsan Qurbajoogta, Daacish iyo Argagixisada) | Laga soo bilaabo Linux
Ku dhowaad 2 sano ka hor ayaan qoray maqaal si qosol leh u qoslay ku saabsan in softiweer bilaash ah loo isticmaali karo xumaanta iyo sida uu ku yimid shatiga JSON. Laakiin markan waxaan kaaga warrami doonaa tusaale aad u daran oo dhowaan dhacay. Tani maahan wax lagu qoslo.
Beri baa waxaa jiray koox muqaawamo ah oo dhowaan isku badalay khaliif oo hadda magaciisu yahay Dawlad Islaami ah (Daacish). Kooxda ayaa si weyn ugu lug leh Dagaalada Sokeeye ee Siiriya iyo Kacdoonka ka dhanka ah Dowlada Ciraaq iyo Ciidamada Yankee, in kasta oo ay dhowaan ka baxeen Al-Qaacida. Waxay u taagan yihiin isticmaalka xoogan ee shabakadaha bulshada si kor loogu qaado dhaqdhaqaaqyadooda, ha noqoto twitterka ama youtube-ka in lagu dhajiyo sawirro ama fiidiyowyo halkaas oo ay hanjabaado ka muujinayaan oo ay dadka u muujinayaan in la dilayo, ama inay qoraan kuwa raacsan oo ay u ururiyaan lacag ujeedooyinkooda Xitaa waxay abuuraan barnaamijyadooda 'android' halkaasoo ay ku soo sheegaan wararkooda.
Laakiin maalmo ka hor ayay ku daaleen Twitter. Waxay ku xirnaayeen waxyaabo badan oo muhiim ah sababtoo ah fiidiyoow ballaaran oo la faafiyey halkaas oo ay ku duubeen jarista wariye iyo Twitter ayaa bilaabay nadiifinta xisaabaadka, marka lagu daro inay bilaabaan olole ka dhan ah faafinta sawirradan (#ISISmediablackout). Markaa waxay dhaheen way fiicnaan laheyd in sharad lagaliyo shabakadaha bulshada ee baahinta maxaa yeelay sida iska cad, shabakad bartama maamulku wuxuu si sahal ah u tirtiri karaa akoonadooda iyo fariimahooda, taasna ujeedadooda uma fiicneyn …….sidaa darteed waxay aadeen qurbaha oo abuuray xisaab cusub, iyo malaha waxay soo wada ururiyeen boodhkoodii. Xubnaha kooxda aasaasiga ah, oo iyagu iyagu ah podmins (maamulayaasha daadka) ayaa ogaaday ciyaarta waxayna ku degdegeen inay ficil qaadaan oo ay dilaan dhowr akoon oo kaliya qeeybaha waaweyn, marka lagu daro bayaan ka soo saarto arinta. Xisaabaadka kale ee boodhadhka kale, waa inaad si qasab ah ula xiriirtaa qowmiyadaha kala duwan oo aad u oggolaataa inuu go'aansado waxa la sameynayo.
Sida iska cad tani waxay ahayd ay si khaldan u turjuntay warbaahinta isagoo leh maadaama Qurba-joogta la baahinaayo, ma tirtiri karo xisaabaadka oo dhan. Qurbo-joog shalay bilaabay war kale oo beeninaya: «Taasi maahan maxaa yeelay waa shabakad baahsan ma baabi'in karno dhammaan xisaabaadka Dowladda Islaamiga ah, waa sababta oo ah waa shabakad baahsan Waa mas'uuliyadda podmin-ka Go'aansiga inaad tirtirto xisaabaadka ku jira boodhkaaga iyo inkale. Haddii aad hesho farriimo aan habboonayn, xor u ahaw inaad ku wargeliso podmins-ka. " Waa inaad aragtaa marathons de doodaha agagaarka Libertad de muujinta iyo sida saxda ah ee wax looga qabanayo su'aalahan iyadoo la ogyahay waxa ay xorriyadda 0 tahay.
Fikradayda: Qurbajoogtu way ogaan doonaan sida looga adkaado. Waan ogahay tan sababta oo ah ilaa iyo hada faafitaanka wanaagsan ee ay u heleen diiradooda asturnaanta iyo softiweerka bilaashka ah (oo ay sii hurisay muujinta Snowden) ayaa ka badbaaday ismiidaaminta mid ka mid ah abuurayaasheeda iyo wafdiga mashruuca ee bulshada, kuwani kama soconayaan inay ka nixiso koox argagixiso ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Miyaa software bilaash ah loo isticmaali karaa xumaanta? Wareegii 2aad (Maqaal runtii halis ah, oo ku saabsan Qurbajoogta, Daacish iyo Argagixisada)
Waxyaabaha kale ee bilaashka ah marwalba waxaa loo isticmaali karaa si anshax xumo leh, waxay ila tahay aniga fiicantahay in qowmiyaduhu tirtiraan xisaabaadka, uma baahna cabir badan in lagu diido rabshadaha iyo naxariis darada kajirta Bariga Dhexe sababaha x ama y inkastoo noocyada aan haysanno.
Waxay ila tahay aniga in go’aanka saxda ah lagu gaadhay tirtirka akoonadaas.
Way adag tahay, waxaan dhihi karaa waad ku mahadsan tahay wadaagista macluumaadka.
Marka laga hadlayo is-dilka Zhitomirskiy, marwalba waan shakiyi doonaa haddii ay runti tahay ismiidaamin.
Ma jiraa qof sharxi kara sida loo furo akoon qurbaha? Mar aan damcay inaan xisaab ka furto qurbaha anigoo raacaya buugaas waanan awoodi waayey.
Ku jawaab lui
Halkan waxaad ku haysaa liis jiingado ah, fiiri kuwa u furan diiwaangelinta, waxaad dooraneysaa mid wanaagsan oo kugu filan waadna iska diiwaangelinaysaa.
Xorriyaddu waa waxa aad haysato oo kuu oggolaaneysa inaad sameyso wax alla wixii aad rabto haddii aadan lahayn masuuliyad ama mabaadi ', laakiin iyadoo ay taasi jirto haddana marwalba way ka fiican tahay daandaansiga (in kasta oo xaaladdan ay u adeegayso daalimiin).
Masaalidii hore ee midida iyo isticmaalkeeda.
Jawaab Alberto F
Waxba yaan lagaa qaban, waxaad ku wareeraysaa xorriyadda iyo fasaad. Xorriyaddaadu waxay ku egtahay halka tan kale ay ka bilaabato, dadkaasna gaar ahaan ma ixtiraamaan xorriyadda noolaanshaha iyo ku noolaanshaha aadanaha kale, sidaa darteed iyagu ma mudan yihiin wax ixtiraam ah.
Waan ku tuman doonaa hehe. Xorriyaddaas aad sheegtay waa xoriyad taban, oo wakiilkeeda ugu weyni uu yahay dimuqraadiyadda furfuran, oo lagu maamulo xeerar, sidaa darteed xorriyadaydu waxay u tagtaa inta sharcigu oggol yahay. Xorriyadda kale waa xorriyad togan, waana midda noo oggolaaneysa inaan cabirno oo aan is-go'aaminno hadba sida falkeennu yahay.
Sidaa darteed, xorriyadda marka laga hadlayo xorriyadda togan kuma dhammaato halka kuwa kale ay ka billowdaan, laakiin lidkeeda way sii ballaaraysaa. Waa caqliga software-ka bilaashka ah, bulshada.
@cris, xorriyadda meelwalba oo aadam ah had iyo jeer waxay hoos tagtay xeerar taxane ah, sharciyo, ama waajibaad nooc uun ah. Taasi waxay ahayd mid joogto ah noocyada aadanaha illaa iyo bilowgiisii, iyadoon loo eegin aragtida aan ka qaadanayno asalkeeda (Waxaan ka hadlayaa Abuurista iyo Evolutionism), sababta tanina waa: In la keeno amar cayiman oo lagu abuuro bulsho macquul ah Tusaalaha tan waxaa laga arki karaa: Shuruucda Eebbe (marka laga hadlayo Abuurista), ama iyadoo la raacayo hay'ad fududeyn kala sarreyn ah oo ilbaxnimooyinkii ugu horreeyay iyo kooxaha aadanaha ay raaceen iyo inay weli ku dhaqmayaan (kiiskii Evolutionism).
@cris waxaad sidoo kale kahadashaa xoriyada togan iyo tan taban (xoriyada utopian iyo xorriyadda la nidaamiyay) waxaadna isbarbar dhigaysaa kiisaska aan ka arki karno adduunka, gaar ahaan waxaad ugu magac dartay "Free Software logic", laakiin waad ilawday wax, iyo waa in xitaa Software-ka Bilaashka ah ay ka jiraan xeerar, waxayna leeyihiin magaca Shatiyada Software-ka. Haa ... waad ilaawday asxaabtaas yar ee nidaamisa xorriyadda barnaamijka, maxaa yeelay midkastoo aad doorato, shati ma aha wax intaas dhaafsiisan, sharci ama qaynuun kuu sheegaya waxa aad qaban karto iyo waxa aanad ku samayn karin softiweerka lagu ilaaliyo hoosta iyaga, xitaa liisanka BSD, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu oggolaanshaha badan, waxay leeyihiin xaddidaadyo gaar ah oo ku saabsan waxa aad sameyn kartid oo aadan ku sameyn karin barnaamijyada ku shaqeeya liisankaas.
Gabagabadii, meel kastoo aad tagtidba, sharciyadu marwalba way raaci doonaan halkaad aadeyso (waxaad dareemi kartaa cadaadis hada laga bilaabo 😀), maxaa yeelay xitaa Caalamka laftiisa iyo dhacdooyinkiisa ugu yaabka badan, sida entropy iyo fowdada, waxaa xukuma taxane taxane ah xeerar si fiican loo qeexay, inkasta oo aynaan wali garanayn oo aan fahmin farsamooyinkaas ... hadda.
Maxaa dhici lahaa haddii guluf dagaal lagu qaado abuurayaasha Backtrack iyo wixii la mid ah ay u adeegsadaan liisanka JSON aaladooda?
Waxaan qiyaasi karaa iyaga oo daanka ka ruxaya qosol badan.
Software-ka, ha ahaado mid bilaash ah ama mid lahaansho, wax wanaag iyo xumaan midna ma yaqaan. Falalka ragga ayaa sameeya.
Ruqsadaha iyo shuruudahoodu waxay ku shaqeeyaan qaab sharci ah, xitaa haddii software-ka uu yahay mid lahaansho ama la xiray, ma jiraan wax ka hor istaagaya qof kale inuu ka gudbo rukhsadaha rukummada guusha (haddii uusan jirin barnaamij xiran oo albaabada dambe leh ... taas oo aan ahayn suurad wacan MAYA kiis iyo sababta software bilaash ah u jiro).
Haddii qof uusan rabin in barnaamijkiisa softiweerka loo adeegsado qaab ay u arkaan mid aan habboonayn, anshax xumo, sharci darro, iwm, sida kaliya ee macquul ah ee looga hortegi karo ma noqon karto mid la abuuro. Laakiin taasi waxay ka dhigeysaa wax anshax, faa'iido leh, daacadnimo iyo faa'iido leh dhammaan wax aan macquul aheyn.
Sida uu Alberto F kor ku sheegay, waa sarbeebta hore ee mindida iyo isticmaalkeeda.
Intaas waxaa sii dheer, DHAMMAAN softiweerku waa natiijada shaqada caqliga oo dhan ... maxaa ka hor istaagaya qof kale inuu abuuro wax u dhigma fikradayda haddii aanan la wadaagin? Gabi ahaanba waxba. Xaqiiqdii waxay noqon doontaa wax ka duwan, laakiin sida waxtar leh.
Ku jawaab argento
Maaha inaad noqotid u doodaha sheydaanka, laakiin inta hartay ee taageerayaasha buuriga waa inay sidoo kale aadaan / dev / null. Iyo sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxaa jira kiisasyo aysan ficil ahaan waxba u qaban marka loo eego nooca murugada iyo nooc kasta oo qalloocan (xitaa telefishanka iyo wakaaladaha waaweyn ee wararka ayaa ka qeyb qaadanaya iyagoo muujinaya fiidiyowyadan).
Oo sidii oo kale aysan ku filnayn, jaritaanka weriyaha waxba ma ahan marka loo eego labada qof ee Ruushka ah ee madaxa u saaray darawal mooto sabool ah jacaylka buunshaha fiidiyow la yiraahdo "3 nin, 1 dubbe" (waan kugu dhaartay, fiidiyowgaasi wuxuu iga dhigay inaan si ballaaran u soo jeedo laba habeen oo isku xigta).
Sikastaba, in jeexjeexyada dejiso shabakadda TOR.
Ma jirtey sabab lagu xuso dilalka Yukreeniyaan? Uma bilaabayo inaan kahadlo cilmi nafsiga reer Kanada sidoo kale (narkisiste kale, oo ka sarreeya necrophiliac)
Si ka duwan kiisaskaas aan soo xusnay (kuwaas oo, nasiib wanaag, aan saameyn badan ku yeelan saxaafadda), Al-Qaacida ayaa yeeleysa, maxaa yeelay waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa wakiil nafsaani-bulsho, waxayna isu dhiibtaa hadallo badan oo been abuur ah (sida aad adigu leedahay waa uun dhammaatay. si loo kashifo maqaal ku saabsan bartaada).
In Peru, in kasta oo dhibaato cad ay ka jirto heerka amniga muwaaddinka, waxay sii wadaan inay adeegsadaan kooxda argagixisada hadda kala go'day ee Sendero Luminoso si ay u soo saaraan jahwareer badan iyo xog-ogaalnimo.
Taasina waa sababta aan dib u xaqiijinayo in buurigu ku sii jiro shabakadda TOR, taas oo, in kasta oo ay ku xanuunto, ay ka wanaagsan tahay Internetka guud (Shabakada 'TOR', in kasta oo ay weerareen server-ka Anonymous iyo FBI, waa meel aamusnaan ah oo laga helo macluumaad ku filan).
Waa inay hubiyaan meeshan (barta 'narco's blog'): Way ka sii xun tahay, in kasta oo maamulkiisu doonayo inuu muujiyo xorriyatul qowlka, si uu u muujiyo naxariis darada ka jirta Mexico, ee aysan warbaahintu soo gudbin kuna qarsan been.
Xusuusin ka soo baxa diazepan: Waan ka saarayaa iskuxirka oo waxaan xusaa magaca oo kaliya qofka doonaya inuu raadiyo. Halkan kuma imaan doonno booqashooyin.
Maqaal xiiso leh. Waxay i xasuusineysaa mid aan dhowr bilood ka hor ka qoray isticmaalka softiweerka bilaashka ah ee militariga:
Waqtigaas, dooddu waxay ku saabsanayd in ruqsadaha GNU aysan ku jirin qodob ka hortagaya adeegsiga barnaamijyada noocan ah horumarka militariga.
Marka laga hadlayo kiiskan qaaska ah, waxaan u maleynayaa in qadka hoose uusan aheyn adeegsiga softiweer bilaash ah ujeedooyin aan xurmada laheyn laakiin waa fikrad aad u qarsoon oo shabakadda ah (taas oo ah waxa shabakadaha sida Qurbajoogtu u hubiyaan). Qodobkaan, waxaan la wadaagayaa maqaal aad xiisayn karto:
Aqoonsi la aanta internetka waa wax fiican ama xun? Waxaan uga tagayaa iyaga cuncun ... aqri maqaalka. Ma heli doonaan jawaabo sugan, laakiin waxay heli doonaan doodaha ugu waaweyn ee ay adeegsadaan kuwa u diiddan iyo kuwa diiddan.
qurbajoogtu maahan shabakad qarsoodi ah. waa shabakad ixtiraamaysa arimaha gaarka ah.
software-ka bilaashka ah maahan dhibaatada waxayna ku dhajiyaan internetka ama maahan wax ay sii wadi doonaan inay sii wadaan, yaan lagu kadsoomin, qof ku takhasusay ama gacan ku dhiigle ma joojin doono inuu mid noqdo maxaa yeelay faafreeb ayaa lagu sameeyay.
Xalku halkaa ma aado oo haddii aan rabno inaan ka hortagno kooxaha sida ISIS oo kale ah, waa inaan isweydiinno siyaasad ka badan su'aalaha macluumaadka.
Su'aal maaha in la joojiyo ama la joojiyo in la sameeyo, taasi waa waxa sharciyada iyo sharciyada caalamiga ah loogu talagalay, waxa ay ku saabsan tahay waa in software-ka bilaashka ah aan loo isticmaalin in lagu dhiirrigeliyo waxqabad cad oo dambi ah iyo xaalad kasta hadey doonaan kor u qaad inay ku sameyso webka qoto dheer.
Miyaad iloobi in "shabakada qoto dheer" ay runtii tahay barnaamij bilaash ah (shabakada tolka)? Maxayse tahay sababta loogu aqbali karo halkaas? Wax macno ah ma lahan
@daryo Web-ka qoto-dheer maahan oo kaliya Shabakada TOR, Shabakadda Qoto-dheer ayaa jirtay tan iyo bilowgii Internet-ka oo ah qaab isgaarsiin u furan dadweynaha. Waxay ahayd militariga bilaabay inuu abuuro Web-ka qotoda dheer, iyagoo adeegsanaya adeegyo kale oo qarsoon, laakiin weli ku jira isla kaabayaasha internetka ee adduunka.
Sidoo kale, waxaa jira adeegyo sida I2P, Freenet, oo sidoo kale loo yaqaan 'Deep Web'.
yukiteru Waan ogahay taas, freenet iyo i2p sidoo kale waa softiweer bilaash ah sidaan u iri maxaa yeelay waa waxa 99% dadku u yaqaanaan "web qoto dheer" ahhgg sidaan u quudhsado erayga xD
Dhibaatadu waxay tahay in shabakadahaani ay muhiimad siinayaan aqoonsi la'aan (Freenet, GNUNet, TOR), iyo ugu badnaan, shabakadaha bulshada sida Qurbajoogta * ma lahan is-dhexgal wanaagsan markii lagu dhejiyo kuwan shabakadaha qoto dheer.
Halkan waa inaan kala saarnaa fikradda ah softiweerka bilaashka ah ee bixinta adeegga leh software bilaash ah.
SL wax akhlaaq ah looma adeegsan karo in lagu sameeyo wanaag iyo sidoo kale waxyaabo xun maadaama akhlaaqiyadu tahay mid shaqsiyadeed, oo ah dadka iyo dhaqamada. Sooftiweerku waa hal shay, sida buug ama mindi oo tusaale ahaan kan dambe ayaa loo isticmaali karaa in lagu jaro rootida sidoo kalena lagu dhaawaco qofka.
Aragtidayda waa doqonimo in lagu daro qodob anshax ku saabsan isticmaalka softiweerka bilaashka ah
Hadda marka la eego arrinta bixinta adeeg, sida kiiskan shabakadaha bulshada, waxay u soo saartaa mas'uuliyadaha milkiilayaasha bogga wixii ku saabsan daabacaadda, ha ahaato argagixisanimo, filimada qaawan ee carruurta, arrinta ku saabsan xuquuqda in la iloobo, aqoonyahan hantida sawirrada iyo waxyaabaha ku jira, iwm, iwm. in kasta oo aysan iyagu ahayn qorayaasha nuxurka, mas'uuliyadda ayaga ayaa saaran.
Waxaan u maleynayaa in sida kaliya ee lagu heli karo adeegga "gebi ahaanba bilaashka ah" ee isku xirka bulshada ay hoos imaaneyso nooc ka mid ah barnaamijyada adeegsada borotokoolka p2p halkaas oo aysan jiri doonin maamuleyaal xilal haya
Maqaalka waa mid aad u xiiso badan, dooda waxay qaadataa waqti dheer.
Waxaan aaminsanahay in qof walba masuul ka yahay isticmaalka ay siiyaan shabakadaha, xorriyadda had iyo jeer waa wax wanaagsan.
Miyaa loo isticmaali karaa barnaamijka bilaashka ah danaha xun?
- Haa, waa suurtagal, sida rikoodhada, muraayadaha iyo baabuurta. Khaladku maahan software bilaash ah. Marka qalabku aad u guud yahay, waxaa hubaal ah in loo isticmaali karo ujeedooyin xun. Laakiin haysashada qalabkaas guud ma fiicna. RMS (2004)
hal shay waa xoriyad. dhaqan xumo kale.
mawduucyada iyo akhlaaqda waa arrimo muhiim ah. Waan fahamsanahay sababta dooda. 200-kii sano ee la soo dhaafay, xorriyadu waxay udub dhexaad u ahayd dhaqanka reer galbeedka marka la eego anshaxiisa (xorriyadda fikirka, xorriyadda hadalka, xorriyadda ganacsiga iyo hal-abuurka ganacsi, iwm.) Dhibaatadu waxay tahay in aanaan isku raacsaneyn arrimaha ku saabsan nooca xorriyadda aan dooneyno inaan horumarinno. Qaarkood, kuwa ugu "xorta ah iyo kuwa xorta ah" ee xad dhaafka ah Mamertos, waxay u ololeeyaan xorriyadda wanaagsan (xorriyadda waa marka aan waxba jirin oo cidina kaa horjoogsanaynin inaad sameyso waxa aad rabto inaad sameyso), kuwa kale ayaa ka dhawrsan muxaafad ahaan iyo aniga fikradayda is-hoosaysiinta, si macquul ah, u doodo xorriyadda taban (xorriyadda waa marka uu qofku qaato go'aanno ku saleysan is-aqoon iyo milicsiga, marka go'aanno deg-deg ah la gaaro, ama jaahilnimo, qofku kama hadli karo xorriyadda).
inta udhaxeysa xorriyadda iyo addoonsiga waxaa jira noocyo kala duwan oo cawl ah. Waxa miiska ku hadhay waa illaa intee in la sameeyo waxa aan dooneyno, iyada oo aan lahayn xeerar ama xadeyn, waxay naga dhigeysaa bilaash badan. laga yaabee in mid walboo laga bilaabo inuu dib uga fikiro nooca xorriyadda loo baahan yahay.
Waxaan u maleynayaa in doodahan Manichaean aysan imaan doonin degel sidan oo kale ah, tan shar iyo wanaag waa mid aad qaraabo u ah
Ku jawaab vinsuk
Qof ayaa ii soo diraya casuumaad waxaan jeclaan lahaa inaan koonto ku yeesho halkan